ရီယိုဒီဂျနေးရိုး - I LOVE RIO DE JANEIRO - သတျခဲ့တာပါ
ရီယိုဒီဂျနေးရိုး မြို့ကနေကိုယ့် Guanabara ဂလားပင်လယ်အော်ကိုဖြတ်ပြီးထိုင်လျက်ပြန်နှစ်ဦး၏အလွန်အစအဦးမှတစ်မူထူးခြားသောနှင့်နက်ရှိုင်းသော connection ကိုချိန်းတွေ့ sharing, ညီမ-မြို့တော်ကိုသတျခဲ့တာပါဖြစ်ပါတယ်။ ထိုသို့အတိတ်၌ရှိ၏အဖြစ်ကယနေ့အဓိပ္ပါယ်ရှိသော, သတျခဲ့တာပါ ရီယိုဒီဂျနေးရိုး မြို့မြို့နှင့်ပြည်နယ်များ၏ရှာဖွေတွေ့ရှိမှုတစ်ပြင်လုံးကိုအသစ်သောရှုထောင့်ကထပ်ပြောသည်။
ငါ၏အစိတ်အပိုင်းရီယိုပြည်နယ်အတွက်ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာမိုးကုပ်စက်ဝိုင်းချဲ့ဖို့ရီယိုရဲ့ဒဿန LOVE သကဲ့သို့, ပေါ်တယ်အသေးစိတ်အတွက်တျခဲ့တာပါရဲ့ယဉ်ကျေးမှုနှင့်ခရီးသွားဧည့် Catalog ၏အမျိုးမျိုးသောရှုထောင့်ကိုဖုံးလွှမ်း။ ချောင်ကမ်းခြေ, ဗိသုကာပညာ, ပြတိုက်, ရုပ်ရှင်ရုံ, ပန်းခြံများ, ခရီးသွားလမ်းညွှန်, စိတ်လှုပ်ရှားအမြင်များ, စားသောက်ဆိုင်, ရုပ်ရှင်ရုံ, အားကစားပြိုင်ပွဲများနှင့်အပန်းဖြေအဖြစ်ဒေသ၏သမိုင်းကိုတွင်အရေးကြီးသောယုဂ်မှ flashbacks အလွယ်တကူပြည်နယ်၏သာယာလှပ, ယဉ်ကျေးမှု၏စိတ်နှလုံးမှာသတျခဲ့တာပါနေရာချခြင်းနှင့် ဉာဏ milieu ။
သတျခဲ့တာပါမြို့များကိုဆက်သွယ်ထားသောတံတားနှင့်တကွ, နှစ်ဦးအကြား7မိုင်အကွာအဝေးနှင့်အတူ, ရီယိုဒီဂျနေးရိုး မြို့ကနေကိုယ့်ကိုဖြတ်ပြီး Guanabara ဂလားပင်လယ်အော်ထဲမှာထိုင်တော်မူ၏။ ဒါကြောင့်တစ်ဦးဌာနေတိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်တဦးကစတင်တည်ထောင်ခဲ့ကြမှသာဘရာဇီးမြို့ဖြစ်၏ - ဒါဟာပထမဦးဆုံးAraribóiaတစ်Tupí-ဂူအာရာနီအကြီးအကဲအားဖြင့် 1573 ခုနှစ်တွင်အခြေချခဲ့ခြိတျခဲ့တာပါ, ဒါမှမဟုတ်အစား, သတျခဲ့တာပါယခုယူထားသောမူသောပြည်, မူလကဆောပိုလိုLourenço dos Índiosဟုခေါ်တွင်ခဲ့သည်။
သတျခဲ့တာပါတစ်ဦး profusely ကြွယ်ဝသောနှင့်ထင်ရှားသောအတိတ်နဲ့အတူ ရီယိုဒီဂျနေးရိုး မြို့ပြည်နယ်၏သမိုင်းအတွက်အရေးအပါဆုံးဒေသတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ယနေ့အချိန်တွင်ပတ်လည် 500,000 ၏လူဦးရေနှင့်အတူ 52 ရပ်ကွက်သို့ ခွဲ. ပြည်နယ်အတွက်ပဉ္စမမြောက်အကြီးဆုံးသောမြို့ဖြစ်၏။
ဒါဟာဘရာဇီးမှာအသက်တာ၏အမြင့်ဆုံးအရည်အသွေးတွေကိုတဦးနှင့်အတူမြို့ဖြစ်၏နှင့်လူတစ်ဦးနှုန်းအမြင့်ဆုံးဝင်ငွေနှင့်ပြည်နယ်များတွင်အမြင့်ဆုံးနှုန်းကစာတတ်မြောက်ရေးရှိပါတယ်။ ဒါဟာအစစိတ်ဝင်စားဖွယ်ပြတိုက်, သမိုင်းဆိုင်ရာအထိမ်းအမှတနှင့်တူးဖော်ရေးများအတွက်စိမ်းလန်းစိုပြေစိမ်းလန်းသောမျက်နှာနှင့်အတူ teems ။
မြို့တော်ကိုလာရောက်လည်ပတ်စဉ်နက်ရှိုင်းစွာနဲ့မရအောင်သမိုင်းကြောင်းအ ရီယိုဒီဂျနေးရိုး မြို့မြို့တော်ကိုချိတ်ဆက်ထားပြီး, ယဉ်ကျေးမှုနှင့်ပထဝီအနေအထားအရ, သတျခဲ့တာပါလူတိုင်းရဲ့ခရီးစဉ်အပေါ်ဖြစ်သင့်တယ်, သူကခြုံငုံဒေသတွင်းမှာအသစ်အမြင်များကမ်းလှမ်းခြင်းနှင့်အမှန်တကယ်ထူးခြားမမေ့နိုင်သောအထင်ကရနေရာဖြစ်သည်အဖြစ်ရာအများအပြားကအလွယ်တကူများမှာ ရီယိုဒီဂျနေးရိုး မြို့ကနေသုံးလို့ရအောင်။
1573, 1819 နှင့် 1835. ဤနေ့ရက်များ၏လက်သီးAraribóiaအားဖြင့်ထိုမြို့ကိုတည်ထောင်၏တရားဝင်မှတစ်နှစ်ရည်ညွှန်းသည်, ကကူညီပေးဖို့အတွက်ကိုဆောင်ခဲ့ခဲ့သူကိုကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်temiminósÍndio: လက်နက်တျခဲ့တာပါရဲ့အင်္ကျီပေါ်မှာထွင်းသုံးရက်စွဲများရှိပါတယ် ပြင်သစ်ဆန့်ကျင်စစ်ပွဲအားထုတ်မှုအတွက်ပေါ်တူဂီ။ ဆောပိုလိုLourenço dos Índiosအမည်ရှိရွာတစ်ရွာ, တစ်ဦးအံ့အားသင့်စရာကိုကျူးကျော်နီးပါးမဖြစ်နိုင်တဲ့အောင်ကုန်းပေါ်ကနေ installed ခဲ့သည်။ ဒါဟာÍndiosကတည်ထောင်ခဲ့ကြရန်ဘရာဇီးမှာပထမဦးဆုံးနှင့်တစ်ခုတည်းသောမြို့ဖြစ်သတည်း။
ဒီပထမရာစုနှစ်တွင်စဉ်အတွင်းဒေသတွင်းကစားနပ်ရိက္ခာထုတ်လုပ်မှုများအတွက်လယ်ယာ install လုပ်ပြီးသောသူဖြစ်သောဂျပန်သို့ကဲ့သို့သောအခြားအခြေချလက်ခံရရှိခဲ့သည်။ စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုမွေးမြူရေးခြံ, သကြားစက်များ, ကုန်သွယ်ရေးနှင့်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၏ထုတ်လုပ်မှုနှင့်အတူဆန်တဲ့ခဲ့သည်။
ရှငျဘုရငျဇွာ VI ကိုနှင့်သူ၏တရားရုံးက 1808 ခုနှစ်ဘရာဇီးကိုလိုနီရောက်ရှိလာခဲ့သောအခါ, ဒေသတွင်း၌အသင်းတော်နယ်ပယ်တစ်အရေအတွက်သိသိသာသာတိုးတက်မှုတွေအများစုကအထူးသဆောပိုလိုဇွာက de Icaraí (Icaraí၏စိန့်ဂျွန်), ဆောပိုလို Domingo (စိန့်တနင်္ဂနွေ) နှင့် Praia Grande (လက်ခံရရှိ သူသည်မိမိမွေးနေ့ကိုဂုဏ်ပြုဘယ်မှာသည့် Big သဲသောင်ပြင်) ။ 1819 ခုနှစ်တွင်လက်နက်၏မြို့ရဲ့အင်္ကျီပေါ်တွင်ဒုတိယနေ့စွဲ, ဒေသတွင်းမှာကို Vila ရီးရဲလ် da Praia Grande (Big သဲသောင်ပြင်၏တော်ဝင်ကျေးရွာ) အဖြစ်တည်ထောင်ခဲ့ပါသည်, နှင့်၎င်း၏နိုင်ငံရေးနှင့်လူမှုရေးဝိသေသလက္ခဏာပေါ် point ကနေ၏ထို့နောက်မြို့ကနေကွဲပြားဖန်ဆင်းခဲ့သည် ဆောပိုလိုSebastião ရီယိုဒီဂျနေးရိုး မြို့ (ရီယိုဒီဂျနေးရိုး မြို့, Saint Sebastian) လုပ်ပါ။
1835, မြို့များ၏သမိုင်း၌ဒုတိယအရေးကွီးပါနေ့စွဲများတွင်အခါ Vila ရီးရဲလ် da Praia Grande (ထိုသည့် Big သဲသောင်ပြင်၏တော်ဝင်ကျေးရွာ) ရီယိုဒီဂျနေးရိုး မြို့, အထွေထွေအစိုးရ၏ထိုင်ခုံနှင့်အတူပြည်နယ်၏မြို့တော်စီရင်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်ဖြစ်ပါတယ်။
ထို့ကြောင့်မြို့သူမြို့သား၏ status မှခြီးမွှောကျနဲ့ Nictheroy အမည်ပြောင်း, အသုံးအများဆုံး Tamoios တိုင်းရင်းသားဘာသာစကားမှာ "က hidden ရေ" ကိုဆိုလိုတာထင်သောခဲ့သည်။ 1841 ခုနှစ်တွင်မြို့တော်ကိုငယ်ရွယ်ဧကရာဇ် Dom Pedro သဖြင့်သွားရောက်ကြည့်ရှု "မှာ Imperial City ကို" ၏မှုးမတ်ခေါင်းစဉ်ကိုရရှိခဲ့ အခမ်းအနားများနှင့်ပြဇာတ်ရုံဖျော်ဖြေပွဲများအတွက် II ကို။ ဒါကြောင့်တဖြည်းဖြည်းပြင်သစ်အင်ဂျင်နီယာ Pedro Taulois အားဖြင့်တီထွင် Plano Taulois (Talouis Plan ကို), နှင့်အညီပြန်လည်ဆန်းသစ်လာစေခဲ့သည်။ ဤသည်ကြိုးစားအားထုတ်မှုကိုထိရောက်စွာတျခဲ့တာပါမြို့ပြဧရိယာကိုနှစ်ဆတိုး။
မြို့တော်တိုးတက်ပြောင်းလဲမှုနှုးကတိုးပြီး 1872 ခုနှစ်တွင်ပိုမိုကျယ်ပြန်ပြည်နယ်မြို့တော်နှင့်ဆက်သွယ်ထားသော, 1861 မှာရေပေးဝေရေး, 1847 ခုနှစ်တွင်သဘာဝဓာတ်ငွေ့မီးခွက်, မီး, 1835 ခုနှစ်ထိုကဲ့သို့သောရေနွေးငွေ့လှေကိုကဲ့သို့, သတျခဲ့တာပါရထားလမ်းတွင် 1837 ခုနှစ်ဝေလငါးရေနံအများပြည်သူအလင်းရောင်အကောင်အထည်ဖော်များနှင့်လျှပ်စစ် Streetcar ခဲ့ကြ 1883 ခုနှစ်။
1894 ခုနှစ်တွင်ကြောင့်ပုန်ကန်နှင့်မြို့အပေါ်တိုက်ခိုက်မှုများဆက်တိုက်ဖို့မြို့တော်Petrópolisပြောင်းရွှေ့ခဲ့သည်။ သို့သော်တျခဲ့တာပါအရေးကွီးပါမြို့ပြကဝင်ရောက်စွက်ဖက်ရေးကာလမှတ်သားသော 1903 ခုနှစ်တွင်မြို့တော်အဖြစ်ပြန်လည်ခဲ့သည်။
1906 ခုနှစ်တွင်လျှပ်စစ်အလင်းရောင်နှင့်ရေနုတ်မြောင်းကို install လုပ်လျှပ်စစ်ပေါ်လာတာမြည်းကို-ဆွဲသူမြားကိုအစားထိုးနိုင်ခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါ Cassino Icaraí (Icaraíကာစီနို) ဟိုတယ်, စားသောက်ဆိုင်နှင့်လောင်းကစားအခန်းပေါင်း featuring, ရီယိုဒီဂျနေးရိုး မြို့မြို့ထဲတွင် Cassino da Urca (Urca ကာစီနို) နှင့်အပြိုင်အဖြစ်ဘရာဇီးနှင့်လက်တင်အမေရိကဂီတ၌ကြီးသောအမည်များ။
1970 ခုနှစ်တွင်ပိုတငျး Presidente ကော်စတာကeဆေးလ်ဗား (သမ္မတကော်စတာနှင့်ဆေးလ်ဗားတံတား) ပိုကောင်းရီယို-တျခဲ့တာပါတံတား, ဘရာဇီးရဲ့အများဆုံး imporant အင်ဂျင်နီယာပညာအထင်ကရအဆောက်အတစ်ဦးအဖြစ်လူသိများတည်ဆောက်ခဲ့သည်။ 1974 ခုနှစ်တွင်တစ်ဦးဥပဒေသစ်မရှိတော့ပါရဲ့မြို့တော်ဖြစ်ခြင်းတျခဲ့တာပါအတွက်ရရှိလာတဲ့, ပေါင်းစည်းခံရဖို့ Guanabara နှင့် ရီယိုဒီဂျနေးရိုး မြို့များ၏ပြည်နယ်များရှိခဲ့ရသည်။ ဤသည်အပြောင်းအလဲများစွာကိုရန်နှင့်ပြောင်းရွှေ့ဖို့သတျခဲ့တာပါ၏လူဦးရေမှာများစွာမှဦးဆောင်ခဲ့သည်။
နှောင်းပိုင်း 1980 ခုနှစ်, မြို့က၎င်း၏ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်နှင့်ကျမှေးလုပျငနျးပြန်လည်တွေ့ရှိ။ ထိုကဲ့သို့သော Teatro စည်ပင်သာယာဇွာ Caetano (ဇွာ Caetano စည်ပင်သာယာပြဇာတ်ရုံ) နှင့် Igreja de Sao Lourenço dos Índios (ထိုဒေသခံတိုင်းရင်းသားများ, Saint Laurence ချာ့) အဖြစ်အရေးကြီးအဆောက်အအုံများနှင့်ဆိုဒ်များဆောက်လုပ်ထားနှင့်ပွနျလညျထူထောငျခဲ့ကြ။
ယနေ့အချိန်တွင်တျခဲ့တာပါဘရာဇီးမှာအရေးအပါဆုံးမြို့တ, သူတို့၏ကိုယ်ပိုင်အပေါ်ရပ်တည်နှင့်အနီးကပ်ဆက်ဆံရေးပုံပြင်နှင့်နက်ရ​​ှိုင်းသော connection ကိုအနီးအနားရှိ ရီယိုဒီဂျနေးရိုး မြို့နှင့်အတူတမြို့လုံး၏ရှယ်ယာပြောပြပါနှစ်ဦးစလုံးကြောင့်ဆွဲဆောင်မှုနဲ့ဖြစ်ရပ်များအမျိုးမျိုးမှမူလနေရာဖြစ်သည်။
သတျခဲ့တာပါအတွက်အများဆုံးဂုဏ်ပြုဆွဲဆောင်မှုတစ်ခုမှာအထင်ကရ "Museu က de Arte Contemporâneaရဲ့ MAC," ခေတ်ပြိုင်အနုပညာပြတိုက်နှင့်မြို့၏သင်္ကေတဖြစ်ပါတယ်။ နာမည်ကျော်ဗိသုကာပညာရှင်အော်စကာ Neimeyer ကဒီဇိုင်း, အ ufo-shaped တည်ထောင်ခြင်းကို Gunabara ဂလားပင်လယ်အော်နှင့် Corcovado နှင့်သကြားမုန့်တောင်တန်းကျော်ထိပျတနျးအမြင်များကိုဝါကြွား။ Neimeyer "ဟုရှုခင်းအတွက်မြည်းကြိုးကိုဖြည်ရာတစ်ခုခု, မိုဃ်းကောင်းကင်ကျော်တဲ့အဖြူ, ငှက်ပျံနှင့်တျခဲ့တာပါ၏ပငျလယျ", သို့မဟုတ် 1996 ခုနှစ်တွင်ဖွင့်လှစ် "ဟုကျောက်၌မွေးဖွားခဲ့ပြီးတစ်ပွင့်ကို" ။ ဖြစ်ပြတိုက်မျှော်မှန်း, ထိုသို့အတွက်ကမ္ဘာကျော်ရည်ညွှန်းကိုးကားဖြစ်လာသည် အနုပညာ, ဗိသုကာပညာနှင့်ခရီးသွားလုပ်ငန်း။
အခြားအရေးကြီးပြတိုက်နှင့်ပြခန်းကို Museu က de Arte Sacra (မြင့်မြတ်သောအနုပညာပြတိုက်), သမိုင်းဆိုင်ရာနှင့်ဘာသာရေးရှေးဟောငျးပစ်စညျး၏ကြွယ်ဝသောစုဆောင်းခြင်းနှင့် neraly ဒေသတွင်းမှာ၏ 8000 နှစ်ကဒီလိုပြောပြတယ်ရသော Museu က de Arqueologia က de Itapú (Itapú၏ရှေးဟောင်းသုတေသနပြတိုက်) အားနေအိမ်ပါဝင်သည် သမိုင်းက။ စုဆောင်းခြင်း၏ပျေါလှငျများထဲတွင်ကြိုတင်ဘရာဇီးရှာဖွေတွေ့ရှိဖို့ပင်လယ်ဒေသအတွင်းရှိခွံ, တူရိယာ, ကျောက်, လူ့အရိုးစုများနှင့်နေ့စဉ်သုံးအမဲလိုက်ထေူသောအခြားပစ္စည်းများ, ငါးဖမ်းလုပ်ငန်းနှင့်စုရုံးလေ့အကျင့်များသိုက်ဖြစ်ကြ၏။ အဆိုပါနေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး da Jambeiro သာယာလှပတဲ့ကြွပ်, ကိုးရာစုခေတ်မျက်နှာစာ, လေသာဆောင်နှင့် Salon နှင့်အတူ 1872 ခုနှစ်ကတည်ဆောက်တစ်ဦးရင်သပ်ရှုမောဖွယ်အိမ်ကြီး, ဖြစ်ပါတယ်။
တမြို့လုံးတွင်အရေးကြီးသောသမိုင်းဆိုင်ရာဆိုဒ်များကို "Forte da Boa Viagem" ကဗျာကို Guanabara ဂလားပင်လယ်အော် contemplates ရသောကိုလိုနီခေတ်၏သမိုင်းဝင်အထိမ်းအမှတ်အဆောက်အအုံပါဝင်သည်။ နောက်တစ်ခုက 1612 ကနေဆယ်ရှစ်နှစ်နှင့်ကိုးရာစုခေတ်သေနတ်၏တစ်ဦးစုဆောင်းမှုနှင့် Chapel ပါဝင်, 1555 ခုနှစ်ကတည်ဆောက်သည် "Fortaleza က de Santa Cruz" (Santa Cruz ခံတပ်) ဖြစ်ပါတယ်။
သတျခဲ့တာပါနှင့်အနီးတဝိုက်သဘာဝအံ့ဘွယ်သောအမှုနှစ်ခုလုံးမြောက်မြားစွာနှင့်ရင်သပ်ရှုမောဖှယျဖြစ်ကြ၏။ မြို့သူမြို့သားဗာဒံနှင့်အုန်းသီးသစ်ပင်တို့နှင့်အတူစီတန်းတာအကောင်းဆုံးမြို့တစ်မြို့တွင်ထင်ရှားသော Icarai အပါအဝင်အံ့မခန်းကမ်းခြေ၏အကွာအဝေးရှိပါတယ်။ Praia Sossego (အပန်းဖြေသဲသောင်ပြင်) ပြုItapúနှင့် Itacoatiara မြို့ရဲ့ကမ်းရိုးတန်းတလျှောက်တွင်လည်းရတနာဖြစ်ကြ၏။ သတျခဲ့တာပါမိသားစုကိုလှုပ်ရှားမှုများနှင့်အပန်းဖြေဘို့စံပြအေးဆေးတည်ငြိမ်ရေသည်နှင့်အတူ surfing နှင့်အားကစားများအတွက်စံပြအားကြီးသောလှိုင်းတံပိုးများနှင့်ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်-facing ကမ်းခြေနှင့်အတူနှစ်ဦးစလုံးသမုဒ်ဒရာ-facing ကမ်းခြေရှိပါတယ်။
တောလွင်ပြင်၌ oceanfront တွင်ထိုကဲ့သို့သော Prainha က de Piratininga, Praia က de Itaipúနှင့်အလွန်ကောင်းမွန်တဲ့ Praia က de Itacoatiara အဖြစ်ကမ်းခြေလွဲချော်ခံရဖို့မရှိကြပေ။ Pedra ၏အောက်ခြေတွင်အသိုက် Itacoatiara ကမ်းခြေ, Elefante ပြုပါနဲ့လှပတဲ့သဘာဝနှင့်စံအိမ်ကြီးများကဝိုင်းတစ်ခုလုံးကိုပြည်နယ်အတွက်အလှဆုံးကမ်းခြေတဦးစဉ်းစားသည်။ Praia က de Itaipúအနီးရှိလည်း Lagoa က de Itaipúအတော်များများ, ငါးမျှားရေကူးခြင်းနှင့်အနားယူသွားပါဘယ်မှာ placid ဂွဖြစ်ပါတယ်။
ဒေသတွင်းမှာလည်းကြည်နူးဖွယ်စိမ်းလန်းသောမျက်နှာတစ်အကွာအဝေးပေးထားပါတယ်။ "Parque da Cidade," သို့မဟုတ်စီးတီး Park မှတျခဲ့တာပါသဲကမ်းခြေ၏လှပသည့်အမြင်များအဖြစ် Guanabara ဂလားပင်လယ်အော်, Sugarloaf, ခရစ်တော်၏ရွေးနှုတ်သောသခင်အပါအဝင်ဒေသတွင်းအမှန်တကယ်အံ့မခန်းအမြင်, ဟောကြားခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါ site ကိုဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့အထင်ကြီးအမြင့်, အမြင်များနှင့်မျက်နှာသာလေတိုက်နှုန်း၏လည်း paragliding များအတွက်အလွန်နှစ်လိုဖွယ်အစက်အပြောက်ဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါ Serra da Tiririca ထိုကဲ့သို့သော Armadillo, စကင့်ခြင်းနှင့် Hedgehog အဖြစ်သစ်ခွနှင့်သဘာတောရိုင်းတိရစ္ဆာန်, လူနေထူထပ်သဖြင့်စိမ်းလန်းစိုပြေအတ္တလန္တိတ်သစ်တောများ၏ကျယ်ပြန့်သောဧရိယာဖြစ်ပါတယ်။ သို့မဟုတ်ဆင်ကျောက်ထရံ "Pedra Elefante ပြု" Itapúaçuနှင့် Itacoatiara ကမ်းခြေ၏ဖိတ်ခေါ်ပို်ကြားမှာ, Serra da Tiririca ၏အမြင့်ဆုံးအမှတ်ပေါ်တွင်တည်ရှိသောနှင့်စိမ်းလန်းစိုပြေတဲ့မိုးသစ်တောကဝိုင်းဖြစ်ပါတယ်။ သတျခဲ့တာပါ၏ bays, အMaricásကျွန်းများကို၎င်း, ညားသောတောင်ကြီးဆန့်ကျင်ရင်ခွင်သောပင်လယ်အလယ် - တစ်ဦးဆင်၏ဦးခေါင်းကိုတစ်ဦးအထင်ကြီးအကြံအစည် bares သောအလွန်ကြီးစွာသောကျောက်ကား, ရီယို၏အံ့ဩဘှယျမြင်ကွင်းကျယ်အမြင်များကိုဟောကြားခဲ့ပါတယ်။
ထို့ပြင် Serra da Tiririca ပြည်နယ်ပန်းခြံ၏သွန်းမျက်နှာကြက်မှာ 1992 ခုနှစ်တွင်ပန်းခြံကမ္ဘာကြီးဇီဝထုအရံအမည်ရှိ၏, ဘေးဖယ်အံ့မခန်းအမြင်များနှင့်အတူလမ်းကြောင်းရာပူဇော်သက္ကာကို မှစ. , ကြွယ်ဝသောအသီးအရွက်များနှင့်အတူအံ့သြဖွယ်အမြင်များကိုပေါင်းစပ်ပြီး, ထိုကဲ့သို့သောကို Alto Mourãoနှင့် Morro Das Andorinhas အဖြစ်တောင်တက်နှင့်တောင်တက် hotspots ပါဝင်ပါသည် ယူနက်စကိုက။
သတျခဲ့တာပါအတွက်နှစ်ပတ်လည်ဖြစ်ရပ်များ, မကြာသေးမီကဆယ်စုနှစ်တစ်ခုအကြာကကဲ့သို့မမြင်ရတဲ့ခဲ့ကြောင်းမကြာသေးမီနှစ်များတွင်အဖွဲ့အစည်းနှင့်မြှင့်တင်ရေးတဲ့အဆင့်ကိုရောက်ရှိနေကြပြီ - ကူညီထောက်ပံ့အကြောင်းရင်းများကို Guanabara ဂလားပင်လယ်အော်ဧရိယာတွင်ခရီးသွားလုပ်ငန်းနှင့်လူဦးရေ၏ကြီးထွားမှု, နှင့်အသစ်အတူတူထားအဖွဲ့အစည်းများဖွဲ့စည်းခြင်းကိုထည့်သွင်း စီမံကိန်းများနှင့်လက်ရှိသူမြားကိုခပ်ပေါ့ပေါ့ပဲတင်ထားရန်ကူညီပေးသည်။
ဒီဇင်ဘာလဇန်နဝါရီလနှင့်ဖေဖော်ဝါရီလလထိုကဲ့သို့သောခရစ္စမတ်, နှစ်သစ်ကူး (Réveillon) နှင့်ပွဲတော်ကြီးအဖြစ်အစဉ်အလာတောင်ပိုင်းတွင်ကမ္ဘာခြမ်းနွေရာသီဖြစ်ရပ်များပတ်ပတ်လည် revolve လေ့ရှိပါတယ်။ အဆိုပါအရာရှိကRéveillonပါတီ Praia က de Icaraí, သတျခဲ့တာပါအတွက်အကျော်ကြားဆုံးကမ်းခြေတရာအရပျကြာတယ်။ ဒီကမ်းခြေတစ်တွင်, သုံးရက်ပတ်လုံးအဘို့လူတွေကိုမျှော်လင့်ခြင်းနှင့်ကြီးမားသောနေ့အဘို့ party ဖို့အဆင်သင့်မရနှင့်မီးရှူးမီးပန်းများကိုစုံစမျးနေစဉ်ကဒီ Pre-Réveillonလေထုကျော်အများအပြားဂီတဖျော်ဖြေပွဲ, ကျောက်ထရံထဲကနေ Samba ဖို့ရှိပါတယ်။
ဇူလိုင်လ morro da viração၏ထိပ်ပေါ်တွင် parque da cidade မှာ, ဆောပိုလို Francisco ကသဲသောင်ပြင်ဆိပ်မှာ, ကအတူထိုကဲ့သို့သောဘုတ်စကိတ်ချန်ပီယံအဖြစ်အရေးယူအားကစားပွဲများတစ်စည်းစိမ်ဥစ္စာများလည်းပါဝင်သည်ရသောအချိန်သည်ဆောင်းကာလ၌ပွဲတော်ဆောင်တတ်၏, ထို paragliding ပြိုင်ပွဲ။ ပွဲတော်မှနောက်ဆုံးပေါ်များအပြင် surfing ပေါ်မှာဤပုံစံသစ်၏ကြီးထွားလာလူကြိုက်များတစ်ညိတ်တည်းဟူသောရပ်-Up ကိုရေနွေး Jurujuba-Icaraíကူးဖြစ်ပါသည်။
ဇူလိုင်လအတွက်, မြို့ကောင်းကင်ဗိုလ်ခြေအရှင် '' တျခဲ့တာပါ em cena '', သို့မဟုတ်တျခဲ့တာပါပုံကြမ်းပွဲတော်, အရှည် 15 မိနစ်ဒါမှမဟုတ်ဒီထက်၏သိသာထင်ရှားသောအပိုငျးပိုငျးဖွဒေသခံပြဇာတ်ရုံကျောင်းများတွင်ထံမှပါမောက္ခများနှင့်ဒါရိုက်တာတစ်ဦး panel ကိုအဘို့, အဖြစ်အများပြည်သူများအတွက်ပြသထားရာ။
ဒါဟာအကောင်းဆုံးကိုပြဇာတ်ရေးဆရာအပြင်အရွယ်ရောက်ပြီးသူနှင့်ကလေးများတို့တွင်ထိပ်ဆုံးသုံးပုံကြမ်းများအတွက်ပေးဆောင်ဆုနှင့်အတူတိုတောင်းသောပြဇာတ်ရုံကိုချိုးဖဲ့၏ယှဉ်ပြိုင်မှုပြပွဲဖြစ်ပါတယ်။ သြဂုတ်လအတွင်းက, အသတျခဲ့တာပါ Jazz ပွဲတော်အခမဲ့ပြင်ပတွင်ဖျော်ဖြေပွဲဖျော်ဖြေဖို့ဘရာဇီးနှင့်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှအခြားသူများနှင့်ဒေသခံအနုပညာရှင်များအတူတကွဆောင်တတ်၏ - သာဖွင့်လှစ်အဖြစ်အပျက်လက်မှတ်ကိုင်ဆောင်သူမှသီးသန့်ဖြစ်ပါတယ်။
ထိုနှစ်တွင်တစ်လျှောက်လုံးအနုပညာ, အားကစားနှင့်ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာဖြစ်ရပ်များငရုတ်ကောင်းတျခဲ့တာပါရဲ့လူမှုရေး, ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာနှင့်အပန်းဖြေရှုခင်းအတွက်ပြီးပြည့်စုံသောဟန်ချက်သေချာပြက္ခဒိန်တစ်ခု plethora ။
သတျခဲ့တာပါ ရီယိုဒီဂျနေးရိုး မြို့မြို့တော်ကိုတွဲပြီးဖွံ့ဖြိုးနှင့်မောင်နှမများကဲ့သို့သူတို့သည်ဘိုးဘေးတို့၏အုပ်ချုပ်ရေး-ထုတ်လုပ်သူများအနေဖြင့်မျက်နှာသာ, ဘဏ္ဍာရေးနှင့်ထောက်ပံ့မှုအတွက်ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်။
အတိတ်ကတျခဲ့တာပါပြည်နယ်၏မြို့တော်အာဏာရအဖြစ်ပြုမူပေမယ့် Guanabara ၏ပြည်နယ်နှင့် ရီယိုဒီဂျနေးရိုး မြို့ပေါင်းစည်းခဲ့ကြသည့်အခါ 1974 ကနေ, အရင်းအနှီးများတျခဲ့တာပါရဲ့ခေါင်းစဉ်ကိုရုတ်သိမ်းခဲ့သည်။ ဤရွေ့ကားမြို့ရွာတို့၌နှမကိုအလှနျပုံအချင်းချင်းတယောက်ကိုတယောက်ရဲ့သမိုင်းကြောင်း, သူတို့၏အပြန်အလှန်ပုံစံသြဇာလွှမ်းမိုးမှုနှစ်ဦးစလုံးမြို့ကြီးများ၏လူဦးရေ, ယဉ်ကျေးမှုနှင့်အပန်းဖြေစည်းလုံးညီညွတ်ကြမှသာတစ်ဦးကိုကြိုးအဖြစ်ပြုမူရသောရီယို-တျခဲ့တာပါတံတား၏ခမ်းနားအခြေခံအဆောက်အဦများနှင့်ဒီဇိုင်းအားဖြင့်ကိုယ်စားပြုသည်။
Serra da Tirririca